Ny faritra misy anao CRG kart mpiara-miasa amin'ny sombin-tsarinao Ny magazay anaty karting anao TM KZ - Mora Racing
Batterie & manomboka
Pads & ampinga
Fitaovana vatana sy kojakoja
Fifaninanana karibonina sy ampahany manokana
Chassis CRG, sombintsombiny ary fitaovana
Akanjo & kojakoja
Fonosana sy kojakoja fampiasa CRG
Fiarovana sy fitaovana fihenam-bidy
Famokarana famaky rear
Fitaovana sy fanidiana fitaovana
Ny kodiarana Le Cont
Fiarovan-doha sy kojakoja
Ireo singa manokana moto
Ny fanadiovana sy fikarakarana
Sehatra fifaninanana sy fitaovana
Lubricants / vatsy
Tariby sy kojakoja
Tsiranoka sy kojakoja manokana
Masinina sy milina TM RACING
Carburetor, ampahan-tsakafo & ampinga
Kodiarana avo lenta Yokohama
Ny fiarovana ny angon-drakitra
Alakamisy - Zoma 9.00 maraina ka hatramin'ny 19.00 ora hariva: Mon - Zoma 9.00 ora maraina hatramin'ny 19.00 ora hariva
Hello. Hiditra | hisoratra anarana
Motorsport - ny fitiavana dia tsy misy marimaritra iraisana
Sokafana ny katalaogy
FIVAROTANA NY FIVORIANA
Taorian'ny taona nanokan-tena, dia mirehareha isika miaraka amin'ny tsara indrindra amin'ny indostrianay. Isika foana dia mahatsiaro ny mpanjifanay. Matokia ihany koa ny manam-pahaizana amin'ny carting!
Bekleidung ho an'ny mpamily / mekanika / ekipa
kodiarana Bringstone / Dunlop / Mojo / MG / Vega / Komet / Maxxis
Carburetor sy ny faritra fanitsiana sy ny fitaovana
Helma e.g. ny fiarovan-tena Arai
rojo Ny kodiarana / tension / blades / accessories
boriboriny manodidina sy fitaovana fanampiny
Pad pads sy fitaovana fanampiny
Fitaovana fandrefesana Alfano / AIM / Unipro
"hiaina" ao amin'ny Google
Mpiara-miasa tena mahay miatrika fifaninanana hazakazaka maro. Manampy amin'ny torohevitra sy ny hetsika ary ny famatsiana faritra. Ambony indrindra ..
Azoko atao ny milaza zavatra tsara momba ny Mora-Racing. Wolfgang Mohr koa dia miezaka ny hanohana ny mpanjifa ho an'ny maodely TM taloha !!! ... thumb up !!!
"Pasquale" ao amin'ny shopauskunft.de
Famerenan'ny motera ambony - ny motera dia toa taorian'ny fanavaozana ary nanana hery betsaka kokoa. Nahavita be !!! Tranombato ambony !!
HO ANY KARTO
HO ANY HITITSIKA
HO AN'NY ianareo
Kodiaran'ny Vega XM3 PRIME (fotsy) 4.60/7.10-5 CIK
Kodiaran'ny kart Vega XM Z PRIME (fotsy) 4.60/7.10-5 CIK
TM piston concave 125cc feno Di Carmine miaraka amina firakotra
Vamec Alu Ergal Racing Ø 50mm karazana sprocket 428 PRO 1mm
TM 4º piston 125ccm dia mameno Di Carmine miaraka amina hazakazaka
TM fisaka ambany piston 125ccm feno Di Carmine miaraka amin'ny sarimihetsika fifaninanana
Vega XM Z PRIME (White) Kodiarana eo anoloana 4.60/7.10-5 CIK
TM KZ Light Racing Performance clutch kit 2 - Kevlar
Kartracing Cap Xeramic (20 taona)
10. Satroka vovoka carburetor Dellorto
1. Karazan-tariby Dellorto karazana VHSB
14. Dellorto Carburetor Compression Spring Large Throttle Slider
NAHOANA MORA RACING?
Mpizara entana izahay.
Mpiara-miasa avy amin'ireo marika hazakazaka miorina isika. Ny entana sasany dia natolotr'i Mora-Racing manerana an'i Alemana.
Izahay dia manolotra vidiny marina.
Ny mpanjifanay dia mankasitraka ny vidin'ny katalaony mora vidy, izay mahatonga ny marika ho lafo vidy ihany koa.
Mankafy ny hazakazaka isika.
Manana traikefa an-taonany maro isika ao amin'ny karting. Amin'ity traikefa ity dia tsy mitanisa afa-tsy ireo kojakoja avo lenta ato aminay izahay.
LE CONT PERFORMANCE TIRES.
HO ANY TANANA
Tongasoa eto amin'ny fivarotana vaovao ho an'ny Kart Racing vaovao
Eto ianao no hahita ny zava-drehetra amin'ny fahitana karting mahomby. Ho fanampin'ny orinasa mpamokatra chassis malaza fantatra sy manerantany amin'ny orinasa CRG sy mpanamboatra motera TM, izay niaraka ...
Momba izany 0
Vaovao ao amin'ny Mora Racing amin'ny fivarotana an-tserasera
Ny Vega XM3 vaovao dia tonga amin'ny fampisehoana vaovao.
Averina indray, ny tahan-java-mihetsika sy ny fitehirizana farany
azo mitambatra tsara.
Ny Vega XM ...
Fanaterana ireo motera TM
Febroary 29, 2020
Makà tombony fampandehanana ny mpamily hafa amin'ity kitapo famoronana avo lenta ity!
Ny fitomboan'ny fampisehoana avy amin'ny 0,5 HP mankany 0,75 HP ...
TONTOLO FAMPISORANA ANAO
Manolotra hatraiza hatraiza isika
14 andro aorian'ny fiverenana
amin'ny alàlan'ny mpiara-miasa miasa amintsika
ao Alemaina tamin'ny 200 €
+ 49 (0) 2402 862 163 Mon - Zoma 8 a.m. ka hatramin'ny 00 p.m.
NY BESTSELLERS AROA
TM momba ny motera RACING
Kodiarana, kodiarana ary fitaovana
Chassis CRG & ampahan-trano
Ampahan'ny motera Pavesi
© 2000-2022 Mora Racing. Ny famolavolana tranonkala sy ny fampiharana an'i Fastmedien24